Eegso xogta wadista wadista - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Eegso xogta wadista wadista
Eegso xogta wadista wadista
Ka dib dejinta ikhtiyaarada soo kabashada, guji batoonka "Start", softiweerka Bplandatarecovery wuxuu bilaabi doonaa inuu iskaanka xogta ku soo geliyo diskka adag ama qeybta. Marka hore, daaqad iskaanka ayaa soo bixi doona, sida hoos ku cad. Daaqadda baarista, waad joojin kartaa ama joojin kartaa skaanka mar walba
daaqadda skaanka, "la baaray. "Waxay muujineysaa baaxadda baaxadda keydka ee la baaray iyo boqolleyda guud ee baadi goobka;" tirada faylasha "waxay muujineysaa tirada faylasha la baadi goobayay;" waqti lumay "waxay muujineysaa waqtiga la sawiray. Baarada horumarka ee hoos ku xusan garaaf ahaan wuxuu matalaa horumarka baaritaanka. Labada badhan ee hoose, "Joogsi" iyo "Jooji". Waad joojin kartaa iskaanka, ka dibna waad arki kartaa oo aad sii fiirin kartaa feylasha la sawiray.Haddii dhammaan faylasha la soo kabsaday la helay oo si sax ah loo arki karo, waad joojin kartaa skaanka; haddii natiijooyinka hadda jira aan lagu qancin, waad sii wadan kartaa iskaanka. Shan, u fiirso natiijooyinka iskaanka (1), qaab dhismeedka tusaha
Jooji skaanka, eeg natiijooyinka iskaanka, waxaad ogaan doontaa in qeybta, dariishadda geedka daaqada bidix. , Waxay noqotaa kuwan soo socda:
Bplandatarecovery si loo arko natiijooyinka iskaanka 'scan'
Marka hore, Magaca Qeybta 'D' oo ay weheliso feylka erayga soo kabashada, waxay muujineysaa in qeybsiga hada la baaray si looga soo kabsado xogta. Qaybtii hore waa qaybtii caadiga ahayd ee diskiga adag, biraha waxaa loo calaamadeeyay sida qeybta hadda jirta; dhowrka qaybood ee soosocda waxaa sawiray Bplandatarecovery Qaybaha, biraha waxaa loo calaamadeeyay sidii loo aqoonsan yahay. Waxaa jira jaransirooyinka hagaha ee qeybinta caadiga ah iyo qeybinta la aqoonsaday Ka dib markaad xulato buugga, waxaad ka arki kartaa macluumaadka liistada faylka ee galka khadadka faylka ee dhanka midig. Mararka qaarkood waxaad arki doontaa fayl ay ku jiraan magaca "faylal agoon ah" iyo calaamad su'aal oo ku taal astaamaha faylka, feylashaan. Feylasha ku jira galka ayaa ah feylasha xogtooda fayl lumay. Ugu dambeyntiina, dhammaan noocyada waa faylasha la xoqeysiiyay iyadoo loo eegayo nooca faylka ka dib markii skaanka dheeriga ah ee noocyada faylka loo yaqaan lagu hubiyay xulashooyinka soo kabashada. Sababtoo ah habkan iskaanka, magaca faylka iyo macluumaadka tusaha lama heli karo, sidaa darteed dooro nooca faylka waxaadna arki doontaa in magacyada faylalka lagu muujiyey daaqadda faylka ee dhinaca midig dhammaantood waa magacyo lambarro taxane ah. Lix, arag natiijooyinka iskaanka (2), shaandhaynta faylalka
ka dib markii aad joojiso ama joojiso natiijooyinka iskaanka, xulo tusaha, guud ahaan daaqadda faylka ee dhanka midig waa sida soo socota Jaantus:
Bplandatarecovery faylalka baaritaanka
Sidee loo sifeeyaa faylasha u baahan in lagu soo celiyo natiijooyinka baaritaanka? Bplandatarecovery wuxuu bixiyaa qaababkan soo socda. 1. U adeegso warqado si aad u shaandhayso faylasha leh magacyo gaar ah ama siyaado gaar ah, sida hoos ku xusan:
Bplandatarecovery filter files magacyada
2. Xakamee in aad soo bandhigto feylasha caadiga ah, iwm., cidhiidhiga xaddiga shaandhada, sida hoos ku xusan:
file filter filter-ka Bplandatarecovery
3, iyadoo la eegayo cabirka faylka, oo la abuuro wax ka beddelid Waqtiga helitaanka, faylasha shaandheynta
Dhagsii badhanka Dheeraadka ah, cabirka faylka iyo waxyaabaha shaandhada waqtiga ayaa soo muuqan doona, sida ku cad hoose:
filter filter Bplandatarecovery files
PreIkhtiyaarada soo kabashada xogta
NextMuuqaalka Xogta lumay